Visa သို့အလည်အပတ်ခရီးလာသောအခါဒူဘိုင်းတွင်မည်သို့အလုပ်ရနိုင်မည်နည်း။ - ယူအေအီးရှိလမ်းညွှန်
နိုဝင်ဘာလ 11, 2017
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?။ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဤသူကား ဒူဘိုင်းကူးလာ။ သငျသညျအညီအမျှနဲ့အခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်သူတို့ကအားလုံးကိုလိုချင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေ။ Identity ကိုအခြားအလုပ်တစ်ခုမုဆိုးမှ, သင့်ရည်မှန်းချက်အဖြစ်အစာရှောင်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်အလုပ်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၏သင်တန်း, စတင်၏ကုန်ကျစရိတ်, ဒူဘိုင်းတစ်ဦးအသက်တာသစ် အတော်လေးမြင့်မားသည်။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်မှာကျနော်တို့ကိုအခြားမြို့မှယေဘုယျအားဖြင့်ရန်ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ကထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းသည်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သည်ကြီး.
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဒူဘိုင်းစျေးအကြီးဆုံးမြို့မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနေရာတွေမှာပိုပြီးအလွန်အမင်းကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားအထွေထွေလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စင်္ကာပူမှာ start များအတွက် uneconomical ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်စာရင်းပြုမှအဝေးပြေးလမ်းလုယက်မှုဖြစ်ပါတယ်နှင့် New York ကလုပ်အားခနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုံးဝအလွန်အမင်းကြီးလွန်းသည်။ အိန္ဒိယလူနေမှုဘို့အတော်လေး ok ပေမယ်နေဆဲ, အများကြီးရှိပါတယ် အလုပ်အတွက်ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက်ချင်ပါတယ်တဲ့သူအိန္ဒိယရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ။ သာရှိသောကြောင့်ပိုကောင်းလုပ်ခ၏မွန်ဘိုင်းကနေဒူဘိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်အများစုဟာ။
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ အလုပ်အကိုင်အများအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များကူညီပေးသည်။ သငျသညျပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများကျော်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကာတာ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိုမန်နှင့်ကူဝိတ်နှင့် အိန္ဒိယမွန်ဘိုင်း။ ဤနည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလက်ကူညီပေးနေအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအမှုဆောင်အရာရှိအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်ထားပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများဖြစ်သည်။
တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းယောဘလွတ် - ဒါဟာတရားမဝင်ပါ!
အဆိုပါငှားရမ်းတိုက်ခန်းပေါ်ကုန်စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကအလေးပေးရန်, စားသောက်ကုန်နှင့်ထမင်းစားခန်းခန်းဒူဘိုင်းအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ ယူအေအီးရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များရောက်ရှိ တစ်ခက်တာဝန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုအနှစ်ချုပ်ရန်သင့်အားရေရှည်မှာ၌စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ပထမဦးဆုံးကသူတို့ကိုအထင်ကြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုငှားရမ်းသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်သင်သက်သေပြမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမြော်လင့်သည်တွင်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်း၌သင်တို့တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်နေစဉ်နှင့် တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးထားရှိခံရဖို့ရှာဖွေနေ.
ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာကျနော်တို့သိပါ တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ် Cryptocurrency စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ဗီဇာရရှိရန်မတိုင်မီဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တားမြစ်သည်။ စစျဆေးဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် google။ ယူအေအီးတခြားပြည်နယ်မှာရှင်းလင်းဖို့သင်သာခရီးစဉ်ကိုဗီဇာအပေါ်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အကြိုးစားရန်။ တစ်ဦးက ခိုင်လုံသောအလုပ်လုပ်ဗီဇာအင်ဒီးယန်းများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအလုပ်လုပ်ဖမ်းမိလျှင်ဆက်ဆက်ယူအေအီးအတွက်ဒဏ်ငွေ, ထောင်ချ, နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်ပြည်ပရှိသို့မဟုတ်ပင်နာမည်ပျက်စာရင်းရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက် ok, အလုပ်အကိုင်အလွတ်။ ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေနေစတင်နိုင်ရန်မည်သို့ ?. သည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ယူအေအီးအတွက် Uber နှင့်တက္ကစီလမ်းညွှန် hit ရန်။ ပြီးတော့ ဒူဘိုင်းဟိုတယ်ရှာဖွေစုဆောင်း။ တစ်ဦးသန့်စင်အဖြစ်ဤရိုးရှင်းသောလွတ်ရယူခြင်းသင်ဖြစ်ကောင်းရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, မကောင်းတဲ့ဟာသဖြစ်ပါသည် ပြည်သူပြည်သားအချို့များအတွက်အလုပ်အကိုင်အ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကစတင်ဘို့ကောင်းလှ၏။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ပင်အလုပ်အကိုင်ဤအမျိုးအစားရဖို့ကအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်အချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်။
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ကြ ယူအေအီးအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ နှင့်အလျင်အမြန်မတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူဝင်မှုဖြစ်လာသည်။ 2019 နှင့် 2020 အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေခြင်းစီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကကျွန်မတို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအပေါ်ဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့ဖိတ်ကြားလွှာခလုတ်ကိုပဲ click နှိပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုများ join ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါတို့ကုမ္ပဏီအုပ်စုများရန်သင့်အသေးစိတ်ကိုထည့်ပါ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်အဘို့အကောင်းဆုံးနေရာ။ သို့သော်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အတှေ့ရရန်သင့်အားအထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်အချို့မျိုးသငျသညျအာရဗီနှင့်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့ချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင် အစာရှောင်ရာဒူဘိုင်းအလုပ်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ သင်ကအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအပိုင်းပိုင်းရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများငှားရမ်းများစာရင်းကိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သင်လုပ်နိုင်သည် ကောင်းသောစုဆောင်းမှုကိုရှာဖွေ ယူအေအီးအတွက်တွင်ကျယ်စွာ။
ကျွမ်းကျင်သူများဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုဖို့နောက်ထပ်စမတ်လမ်း။ မည်သို့အကြောင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာပြီးကိုယ့်ကိုယ်မြှင့်တင်ရန်။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်ရှင်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအဆိုပါထူးချွန်ဆုံးအလုပ်ရှာဖွေသူများတပြင်လုံးကိုပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်ရှာနေသူတဦးတည်းဖြစ်၏။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌မသာ။ သငျသညျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများထူးချွန်ဆုံးအုပ်စုများ join ချင်လျှင်ဒီတော့သင်ရှာနေစတင်ရန်လိုအပ် ယူအေအီး၌မသာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်.
ဒူဘိုင်းခရီးစဉ်ဗီဇာတစ်ဦးစောင့်ရှောက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုံးစံလျှောက်ထားစဉ်
သငျသညျရှင်းလင်းဖို့ပဲအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းကူးပျံသန်း။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျ ကိုယ့်အလုပ်ရှာနေသူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာ။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကသင်၏ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်။ အချိန်ကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်ဦးတာဝန်ကျနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်, ဒူဘိုင်းအတွက်မဆိုအလုပ်ရှာဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်ခက်ကြိမ်မှတဆင့်ရယူကူညီပေးသည်တစုံတခုကိုမျှစကားပြော။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအသုံးပြုပုံကအရေးပါင် အဆိုပါငှားရမ်းစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီအထင်ကြီး။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်သင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်ပြဌာန်းခွင့်မဟုတ်ဘဲစိတ်ကျရောဂါကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အလငျး၌, ရှာဖွေဒီဖြစ်ပျက်စေရန်နှင့်သင်ရကျိုးနပ်များမှာအဘယ်ကြောင့်ထွက်ထောက်ပြဖို့ကြိုးစားပါတယ် တစ်ဦးအစိုးရကဏ္ဍတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့သင်ဦးဆောင်ကြောင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ငှားရမ်းထားခံရဖို့။ ဤအတူစိတ်တွင်အလုပ်ရှာဖွေရေး၏အလေးအိတ်၌-Up-and go ရ။ စနစ်တကျရှိနေခြင်းနှင့်စတိုင်အကျိုးဆက်စစ်ဆင်ရေး သငျသညျအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီကြမည် တစ်အလုပ်လုပ်ဗီဇာစေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျကိုပင်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့သွားရောက်မီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အသင်တို့သည်လည်းကုမ္ပဏီများကငှားရမ်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်း search engine ကို နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်လယ်ကွေ့စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
အိုကေ, ဒါကြောင့်တိုင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေသူတစ်ဦး။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူများအများစုအဘူဒါဘီအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ဤအရပျဟာအကြားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အတွက်အရပ်ထိပ်။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတို့အကြားအဓိကကွာခြားချက်အရွယ်အစားနှင့်အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒူဘိုင်းအတွက်ကြောင့်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့ဖို့ပိုပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီသည်နှင့်အခြားလက်ပေါ်, အဘူဒါဘီ, သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, ဒူဘိုင်း, အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများရှိပါတယ်။ သို့သော်များအတွက် အလုပ်ရှာနေကြသူပါကစ္စတန်အဘူဒါဘီအတွက်နေရာများတွေအများကြီးရှိသေး၏။ အချို့လူများကအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းသွားနှင့်လုံးဝယူအေအီးအတွက်အခြားမြို့များအကြောင်းကိုမေ့လျော့ပြီ။ နေရာလွတ်ပေးသူအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏တစ်ခုတည်းသောကျော်ကြားမြို့တော်မရှိပါ။ သငျသညျ Sharjah အတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင် နှင့်သင့် CV ကိုလျော့နည်းချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူအဘူဒါဘီ။ သို့သော်ငြားလည်း, နီးပါးတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ hits ဒူဘိုင်းဘို့ဤဈေးကွက်သောသင်သတိရရမယ်.
အမ်းမရိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်သိသင့်တယ် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်စတင်ဖို့အတွက်ဘယ်လို။ သင်ပင်စော်ဘွားများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်ထားမီစစ်ဆေးသင့်အများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျလိုအပျ သေချာသင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်စေရန်.
သငျသညျအဘို့သင့်အဖုံးစာတစ်စောင်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာမကြာခဏသတိမမူတစ်ဦးကအမှတ် တစ်ဦးတိုးရစ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ အဆိုပါအဘယ်သူအားမျှအဆက်ဆက်ကြေညာချက်မကြာခဏဤကဲ့သို့သောရှာဖွေနေ။ ငါဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်လက်ရှိအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ပေါ့ယေဘုယျအားတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ဗီဇာရဖို့ရှာဖွေနေ။ ချစ်ခင်ရပါသောစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာငါ၏အဗီဇာ 02.06.20 အပေါ်ကုန်ဆုံး။ ငါသည်သင်တို့ငါ့ကိုအများအပြားပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်ရယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှု နှင့်ဆရာယနေ့ငါဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ တဖန်သင်တို့စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာမှတိုင်းအီးမေးလ် CV ကိုပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်မြင်ရလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်, သင်သည်ဤချဉ်းကပ်မှုထင်ပါသလဲ သငျသညျသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ဆင်းသက်ကူညီပေးသည်? ။ မှာအားလုံးရုတ်တရက်သော်လည်းမအားလုံး။ နောက်ဆုံးတော့ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းအားလုံးအလေးအနက်ထားဖယ်နောက်နေလိမ့်မည်။
နိုင်နေသော်ထမ်းခေါ်ယူမှုမန်နေဂျာ ပင်လယ်ကွေ့ကနေအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဆောင်ကြဉ်း။ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသုတေသီများနှင့်အတူသာထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ကော်မရှင်များ၏အမြင်တွင်သူတို့က, တကယ်တော့, အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှင်ထံမှပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ် သူတို့ကိုစူပါအလုပ်များအမှုဆောင်အရာရှိစေသည်။ ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ထားရန်, သူတို့ကတစ်ခုသာပရီမီယံကော်မရှင်, လျော်ကြေးများနှင့်အလွန်ကောင်းသောလစာလုပ်ခဂရုစိုက်။ အထူးသဖြင့်စုဆောင်းမှု မန်နေဂျာများလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ဆည်းပူး။ တနည်းအားဖြင့်စိတ်တွင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး function ကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ ကြောင်းနှောငျ့ယှကျဘူး ယူအေအီးနေရန်သင့်ခွင့်ပြုချက် မကြာမီသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒီအဆင်မပြေဒုက္ခ၌သင်တို့ကိုငါထားမည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့တစ်ဦးအားနည်းချက်ကတော့သင်သုံးစွဲနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင်း အင်တာဗျူးအဘို့ရာအရပ်ကိုကြာ.
ကျွမ်းကျင်မှု - အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့မှအများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တုံ့ပြန်မှု
အပြုသဘောဘက်တွင်တစ်ဦးနေဆဲအနည်းငယ်စာနာယူအေအီးနိုင်ငံသားတွေရှိပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်တစ်နေ့နေ့မှာအတွက် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ် အလည်အပတ်ဗီဇာပေါ်မှာ။ သို့သော်စိတ်ကိုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဘက်ဝက်ဝံအပေါ်ကိုသင်တစ်ဦးချင်းအလင်းခရီးသွားလာကြသည်မဟုတ်။ ငှားရမ်းမန်နေဂျာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရယူသောအဆုံးရန်။ နေ့တိုင်းအကျိုးဆက်, fဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အချင်တဲ့သူများ rom အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ အလည်အပတ်ဗီဇာပေါ်မှာ။ ဧကန်အမှန်အတူအနေအထားကိုစီမံခန့်ခွဲသူကားအဘယ်သူ သင်နှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်ရှာဖွေနေအဖြစ် ဒူဘိုင်းတစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာပေါ်မှာ။
ကိုအောကျမေ့ရဆုံးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ သာအကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲအနိုင်ရ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အလုပ်လုပ်ဗီဇာရဖို့။ သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့ပြောနေတာသည့်အခါလူတိုငျးအတှကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအပေါ်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရများတွင်မှန်ကန်သောစကားများသုံးစွဲဖို့သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကဖြေဆိုကူညီပေးပါမည် ဒူဘိုင်းတစ်ဦးကယောဘကိုဘယ်လိုသွားရမလဲအကြောင်းကိုမေးခှနျးက.
သင်တို့ကိုမကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အ အစာရှောင်ခြင်းအလုံအလောက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?။ စိတ်ထဲမှာ fix ရန်အရေးကြီးသောအယူအဆလေးစားထိုက်သူနှင့် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်မှု။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဦးတည်နေတဲ့ချွန်ထက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သင်သည်သင်၏ဗီဇာအလွန်မကြာမီထွက်ပြေးပြေးသောစိတ်ကူးရ။ ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, သင်ပင်အတွက်မဆိုအလုပ်ရရန်ပြင်းထန်သောများမှာ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအလုပ် မည်သည့်အနေအထားအတွင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခက်ခဲအခြေအနေ, သင်တို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထုတ် နှင့်ငှားရမ်းကုမ္ပဏီအသိပေး.
ဒါက OK ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တကယ်တော့, သင်ပညာရှင်ပီသစွာဒီ execute နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အဆင်မပြေမှုတစ်ခုထုံးစံ၌ဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, သင်ဖို့အဆင်သင့်မဟုတျပါလျှင် ကော်မရှင်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် ဒီအချိန်။ ဆက်ဆက်, ဖြစ်စေအမှု၌, သင်သည်အခြားအခါသမယအတွက် pop သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်တိုင်း2နှစ်ကျော်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတွေလည်းဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း သူတို့အဘို့အကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအပေါ်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူစကားပြောနေစဉ်ပညာရှင်ပီသစွာပြုမူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်သင့် အခြားသူတွေအဘို့ကြီးသောလေးစားမှုနှင့်အတူကောင်းစွာပြုမူ။ သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာကျိန်းသေစိတ်ကိုသင်၏ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိရှိခြင်းကြောင့်, သငျသညျသစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများအတွက်ဆင်းသက်ကူညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဒူဘိုင်းတစ်ဦးကယောဘကိုရယူပါဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်း Mall ကယနေ့ CV ကို upload.
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, သငျသညျအစအခြို့သောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေရာနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းမှာအဲဒီအထဲကရောက်ရှိ ဒူဘိုင်း blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့်သင့်တန်ဖိုးကိုသရုပ်ပြတိုင်းအစည်းအဝေးသြဇာလွှမ်းမိုး။ တောင်မှသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရပ်မှသင်တို့ကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် homecoming လျှင်။ ်ထမ်းရှာဖွေသူငှားရမ်းလျှင်မည်သို့ပင်ဆိုကအခြားသောလမ်းထားရန် သင့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာမှတဆင့်အောက်ပါအတိုင်း။ နောက်ဆုံးမှာစှဲမွဲနှင့်အမှုထဲတွင်ဘုတ်အဖွဲ့မှသင်၌ဆောင်ခဲ့စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာသည်။
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာငှားရမ်းမစိုက်သင်ဗီဇာနှင့်အတူပေးနိုင်ပါသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ ်ထမ်းရှာဖွေသူစာချုပ်အပေါ် Co-လည်ပတ်လျှင်ကစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းက။ သင်ကုမ္ပဏီတခုအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သငျသညျပြည်ပမှာ Philipines ထံမှအလုပ်သမားလျှင် ကြောင်းအမှု၌, တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ဗီဇာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပင်ရိုးဤအချက်များပေးထား စော်ဘွား လေယာဉ်ပျံလက်မှတ်ညာဘက်လူတစ်ဦးသည်နိုင်ပါသည်။ သူတို့နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်အလွန်ကောင်းသောလုပ်ခလုပ်ခစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်သမျှနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏။
တစ်ဦးတိုးရစ်ဗီဇာနဲ့ CV ကိုအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်တစ်ဦးအရည်အချင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita နှင့် cover letter ကိုမကြာခဏ updated ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဤအကြောင်းပြချက်သည်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ အလည်အပတ်အပေါ်ဒူဘိုင်း တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူဘို့ဗီဇာ။ အထူးသဖြင့်အခါသင် တောင်အာဖရိကဆီကနေအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီရပါမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အများကြီးပိုပြီးမြန်ဆန်အလုပ်အကိုင်အစာကိုရတဲ့အတွက်စော်ဘွား၏မြို့တော်အတွက်အမှုဆောင်အရာရှိစကားပြော။ သူတို့အထူးသဖြင့်လျှင် ယူအေအီးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။
သူတို့အခွအေနမြေားလက်အောက်တွင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်ရှိခြင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်များသင့် task။ နည်းမှန်လမ်းမှန်၌သင်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ ဒါဟာသင်ပင်တဦးတည်းမိတ္တူပေးပို့မတိုင်မီတစ်စုံတစ်ဦး၏ CV ကိုကြည့်ရှိသည်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိကိုယ်ရေးရာဇဝင်စာရေးဆရာများကြိုးစားကြ သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာကြသည်လျှင်။ ဒါကြောင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အနာဂတ်မှာအလုပ်ရှင်ရန်သင့်အားပေး CV ကိုအရေးတကွီးသဘောထားရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ဒူဘိုင်းစာစီလုပ်ငန်းတွေမဆိုသဒ္ဒါသို့မဟုတ်အခြေခံအမှားများကိုမဆံ့မခံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချို့ကိုဥပမာ, အဘယ်သူမျှမဖုန်းနံပါတ်အခြေခံမှားယွင်းမှုများရှိသည်။ သို့မဟုတ်ပင်တောင်းဆို သငျသညျပြည်ပမှာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်လွယ်ကူသောဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျအလည်အပတ်ဗီဇာများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ယနေ့နေရာလွတ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီနေ့သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အားလုံး Google ကတစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်နေရာလွတ်ဘို့သုတေသနဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်လို့ရပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေ။ ပဲကူးလာသူကိုအထူးသဖြင့်သစ်တစ်ခုတဦးတည်း ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ဖူးသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုမေးပါ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ် ?. ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုအထူးကုကျိန်းသေသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ကူညီပေးနေမျှော်လင့်။ ယနေ့တွင် နေရာလွတ်ရဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှများမှာ။ သငျသညျအဖြစ်မှန်အတွက်သိထားဖို့လိုအားလုံးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဟိုဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အခွအေနမြေိုးကျနော်တို့ခရီးစဉ်ကိုဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့ထောက်ပြ။ သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့အဖုံးစာ၌စကားပြောအဖြစ်အများအပြားအသေးစိတ်ကိုထည့်ပါ။ ယူအေအီးအတွက်အောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်သည်အလုပ်အေဂျင်စီ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်ပင်တတ်နိုင်သမျှ ယူအေအီးအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များရှာ။ ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်နောက်ထပ်အဓိကသော့ချက်အချက်သင်သည်အလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ကျရှငျနကွေတဲ့အထူးသဖြင့်ယနေ့အထိထူထောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဗီဇာအဆင့်အတန်းဟာကြောင့်နေ့စွဲ od ကုန်ဆုံး။ အတွက် ဗီဇာအလုပ်ရှာဖွေ၏ရည်ရွယ်ချက်။ သင့်ရဲ့ထွက်ခွာနေ့စွဲဖြတ်သန်းသင့်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏နေအိမ်တိုင်းပြည်ဖုန်းနံပါတ်, အီးမေးလ်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အဖုံးစာ၌လည်းရေးပါ။ အားလုံးသုံးအဆက်အသွယ်ပါဝင်သည်ရပါမည် အင်တာဗျူးအဘို့ သင်၏ CV နှင့်အဖုံးစာ၌။
အဖြစ်မှန်မှာတော့အဘယ်သူမျှမသိတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့များအတွက်မှန်ကန်သောအဖြေ။ တောင်မှအဘယ်အရာကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုသင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်သလဲ? CV ကိုကဘယ်လောက်ကောင်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အချက်များရှိပါသည်။ အခါအဘယ်မှာစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ယခုအချိန်တွင်ငှားရမ်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဒါမှမဟုတ်တပြင်လုံးကိုပင်လယ်ကွေ့များအတွက်။ ဒါဟာအားလုံးအချို့သောကံနှင့်သင့်လက်၌ကောင်းသောအတွေ့အကြုံရှိခြင်းအကြောင်းပါ။
အတွင်း၌အိပ်မက်ရယူခြင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ စော်ဘွား၌တည်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအတွက်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနီးပါးတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများဘို့အတှကျအိပျအိပ်မက်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျရှိနိုငျသောနေရာလွတ်အများစုပြီးသားအခြားသူများခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ကောင်းမွန်သောအဖုံးစာတစ်စောင်ကြောင့်။ တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာကြသည်သူအလုပ်ရှာဖွေသူများ၏အချို့ ယူအေအီးအတွက်။ ကျိန်းသေတစ်ကယ့်ကိုအကောင်း CV ကိုများနှင့်ဖုံးစာတစ်စောင်ရှိခြင်း။ နေသောအထူးသဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများ အဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်ဆရာမအဖြစ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေလျက်.
တကယ်တော့, ကသင့်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းထားရန်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita နှင့်ဖုံးစာတစ်စောင်ကိုပြင်ဆင်ဆက်လက်တည်ရှိရန်ရှိသည်။ အဲဒီလို့ပြောပေမယ့်ရန်သင့် CV ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းစတင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် အခွင့်အာဏာအလုပ်အေဂျင်စီများ။ သင့်ရဲ့အထူးပြုနဲ့သိမ်းပိုက်အတွင်းအလုပ်သစ်အဖွင့်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်။ ၏ရည်ရွယ်ချက် ပင်ပိုကောင်းကော်ပိုရေးရှင်းအတှေ့အကွုံရတဲ့။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဒူဘိုင်းအတွက်ပိုပြီးသင့်လျော်သောအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဘို့သင့်ကိုဆင်းသက်ရာရိုးရှင်းတဲ့အရည်အချင်းများဖော်ပြသည်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်သင်သည်မျှော်လင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုဝင်ငွေသေချာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သတိရရမည်ဖြစ်သည် သင့်ဝင်ငွေလူနေမှုအပြည့်အဝကုန်ကျတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ငှားရမ်းသူသိပါလိမ့်မယ်သေချာပါစေ။ တဖန်သင်တို့ဥရောပကနေလျှင် အဘယ်ကြောင့်စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဥရောပမှကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့လက်တွေ့ထွက်ရှာတွေ့မတိုင်မီသိရန်လိုအပ်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါသည်။ အဆိုးဆုံး သငျသညျပြီးသားစော်ဘွားအတွက်လေယာဉ်ဆင်းသက်လျှင်။ သင့်ရဲ့ updated CV ကိုအတူကျော်လမ်းလျှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွာ Give နှင့်အခြားလူများနှင့်စကားပြော။ ဟဲလိုသူတို့ကိုတောငျးဆို, ငါသည်ဤငါ၏အ CV ကိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အလုပ်ရှာနေတာပါ။
2019 နှင့် 2020 ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအတွက်ကြီးထွားလာစျေးကွက်လည်းမရှိ။ ဒါ့အပြင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေဘို့သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသုံးပါ။ သငျသညျလမ်းလျှောက်နှင့်သင်စျေးဝယ်သို့မဟုတ်အခြားအမှုအရာလုပ်နေတာ၏ CV ကို Andy အချိန်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကျိန်းသေသင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုဖြုန်းမနောက်ဆုံးတွင်ဒူဘိုင်းသဘောတူညီချက်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့သိမှတ်ကြလော့။ ဒါကြောင့်သင်ကငှားရမ်းနိုင်သည်ကိုမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှဖုန်းကျော်ကသင်၏လျှောက်လွှာကိုပေးပို့ဖို့သေချာပါစေ။
ဒူဘိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်အလုပ်ရရန်ဘယ်လိုအဘို့နောက်ထပ်စမတ်စိတ်ကူး။ ကျိန်းသေအသေးစိတ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဆော်ဒီအာရေဗျကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လမ်းညွှန်။ ခင့်နိုင်ငံတော်ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီတွေရဲ့အသေးစိတ်စာရင်းရှိခြင်း။ သို့မဟုတ်ပင်ထွက်ရှာတွေ့ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်း startup ဘယ်လိုစတင်သလဲ။ သငျသညျပင်လယ်ကွေ့တွင်ရှိနိုင်ပါသည်ဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရယူခြင်းသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်ကလူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အံ့သြဖွယ် ကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အတှကျအပင်လယ်ကွေ့တိုင်းပြည်။ ဤတိုင်းပြည်များတွင်သငျသညျန့်အသတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ အခြေခံနေရာလွတ်မှတက်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုက C-Level နေရာလွတ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်ခြမ်းတွင်သာမဟုတ်တော့များအတွက်တည်းခိုအတော်လေးခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ ဥပမာ, အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုအများစုသာကန်ထရိုက်တာများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဝင်ငွေကောင်းကောင်းလုပ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တည်းခိုကြောင့်အသကျရှငျလုပ်ဖို့အတော်လေးခက်ခဲသည်.
ဒါ့အပြင်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိ, သင်ကောင်းသောရှာဖွေစုဆောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေကြသည်လျှင်။ သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် ဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေအလုပ်လုပ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒီမျိုးကိုအကောင်းဆုံး-paid ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ် ပင်လယ်ကွေ့တွင်ဒါပေမယ့်လည်းမလေးရှား၌သာ အမေရိကန်နှင့်ဥရောပ။ ဒါကြောင့်သင်ကကူဝိတ်အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက။ သို့မဟုတ်ပင်ဘဏ်မန်နေဂျာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏စီးတီးရှိ။ သင်, နောက်ပိုင်းမှာ, ကနေဒါသို့မဟုတ် English ဘဏ္ဍာရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေစတင်နိုင်ပါသည် ကော်ပိုရေးရှင်း.
အဘို့အဖြေတစ်ခုရယူခြင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့ တကယ်လွယ်ကူပြီးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သင်ကလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်းအားဖြင့်ငှားရမ်းထားခံရဖို့နည်းလမ်းများစွာစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည်။ သင့်လက်၌အကောင်းတစ် CV ကိုများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိခြင်း။ သငျသညျတပြင်လုံးကိုဖတ်နိုင် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ် Facebook ကိုလမ်းညွှန်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုသင်လေ့လာတဲ့အခါ ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်အဘို့အထားရှိပါလိမ့်မည်.